पोष्ट व्यायाम किन गर्ने ? – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७८, आईतवार ०६:४४
पोस्ट व्यायाम भनेको सत्र समाप्त हुनु र व्यायाम पछि शरीरको तापमानलाई सामान्य बनाउने कसरत गर्नु हो। तपाईँले भर्खर यसलाई आफ्नो मनपर्ने कार्डियो वर्गहरू, जुम्बा वर्गहरूमा हल्लाउनुभयो, वा हुनसक्छ तपाईँले कडा शक्ति प्रशिक्षण सत्र समेट्नु भएको छ, तर तपाईं अझै समाप्त भएको छैन! यो योग अभ्यासलाई जलाउने समय हो। त्यो सही छ। एक पोस्ट-कसरत खाली शान्त र तन्काई कसरत को रूप मा नै महत्त्वपूर्ण छ। र सहस्राब्दी को आसपास को लागी गरिएको कोसिस र सत्य परम्परा भन्दा तपाईको शरीरको तापक्रम लाई तल ल्याउने भन्दा राम्रो तरिका के हो? योग यहाँ सात कूल डाउन योग पोजको अनुक्रम हो जुन तपाईंको थकित मांसपेशीहरूको पालनपोषण गर्दछ, तपाईंको दिमाग शान्त गर्दछ, र यदि नियमित रूपमा गरिन्छ भने, यी योग सत्रहरू सबै भन्दा धेरै गतिशील तर्फ फिचर गर्दछ, लचिलोपन र गतिशीलता बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यसो भए, लामो सास फेर्नुहोस्, त्यो चटाई वा कम्बल रोल आउट गर्नुहोस् र हामीसँगै केही कसरत योगको साथ हाम्रो मिलो पाउनुहोस्।
पोस्ट कसरतको फाइदा
• पूर्ण शरीर शीतल कडा शारीरिक गतिविधिको आफैँलाई सजिलो बनाउनको लागि कसरतको अन्त्यमा शान्त हुन सरल व्यायामहरू प्रयास गर्नुहोस्। माथिल्लो शरीर शीतल यसले मांसपेशीको लचिलोपनलाई सुधार गर्न र मांसपेशीको जडबाट राहत पाउन मद्दत गर्दछ।
• तल्लो शरीर शीतल यो राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न, चोटपटकको जोखिम कम गर्न र गतिशीलता र गतिको सीमा बढाउन मद्दत गर्दछ। गतिशील स्ट्रेचिंग यसले मांसपेशी फिटनेस कम गर्न र मांसपेशीको तापक्रम बढाउन मद्दत गर्दछ। कसरत योग पोस्ट गर्नुहोस् योग र एचआईआईटी कसरत सँगै वास्तवमै लाभदायक छन् किनकि यसले बोसो जलाउन र मेटाबोलिजम बढाउन मद्दत गर्दछ।
• पूर्व कसरत योग यसले श्वासप्रश्वास सुधार गर्न र लचकता बढाउन मद्दत गर्दछ।